के तपाईको सामाजिक सञ्जाल चलाउन नपाउँदा टेन्सन हुन्छ ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १२ बैशाख २०७५, बुधबार १६:४० लेखक नेपाली जनता
के तपाईको सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट छ ?
फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राफ, ह्वाट्सएप… अन्य थुप्रै..
तपाई यीनलाई दिनमा कति पटक चेक गर्नुहुन्छ ? नयाँ म्यासेज, लाइक, रिप्लाई वा कमेन्ट हेर्नको लागि तपाई सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट कयौं पटक लग इन गर्नु हुन्छ।
कयौं पटक यस्तो हुन्छ कि तपाईलाई समय नै मिल्दैन, आफ्नो फेसबुक ट्वीटर फिड चेक गर्न भ्याउनुहुन्न। अनि तपाईलाई टेन्सन हुन्छ।
वास्तवममा तपाई एक्लो हुनुहुन्। पुरै विश्वमा निकै यस्ता व्यक्तिहरु छन् को सामाजिक सञ्जालको लतमा छन्। फेसबुक, ट्वीटर चेक नगर्दा बेचैन हुन्छन्।
मनोवैज्ञानिकहरु यसलाई एक लत, एक रोग मान्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालको लतको सिकार भएका मानिसहरु अब बकाइदा यसबाट छुटकारा पाउन विशेषज्ञको सहयोग लिन थालेका छन्। बीबीसीले यसबारेमा एक लेख प्रकाशित गरेको छ।
यसलाई ‘डिजिटल डिटक्स’ नाम दिइएको छ। अर्थात डिजिटल विषबाट मुक्ति।
यसको लत छुटाउन मानिसहरु अनेक प्रयास गर्दैछन्।
अमेरिकामा त कयौँ मनोवैज्ञानिक यसको लागि डेढ सय डलर प्रतिघण्टाको फिस असुल्दै छन्। अझ लामो सेशनको लागि त पाँच सय डलरसम्मको फिस लिनेगर्छन्।
मुद्धा नै यति गम्भीर छ। आज सामाजिक सञ्जालको कारण मानिसलाई यस्तो लत लाग्दैछ, जो रक्सी वा अन्य कुनै नशा भन्दा पनि भयानक छ।
अमेरिकाको ह्युस्टन शहरका थेरापिस्ट नेथन ड्रिस्केल भन्छन्, अघिल्लो केही वर्ष देखि सामाजिक सञ्जालको लतका बिरामी तीव्र रुपले बढेका छन्। उनीसंग यसबाट छुटकार पाउन आउनेको सङ्ख्या निकै ठूलो ।
यसको सङ्ख्या वर्षेनी करिब २० प्रतिशतले बढ्दो छ। अर्थात सामाजिक सञ्जालको लत निकै तीव्ररुपले महामारी बन्ने तर्फ बढेको छ।
नेथन भन्छन् कि पहिले मानिसहरु भिडियो र कम्प्युटर गेमको लतबाट छुटकार पाउने सल्लाह माग्न आउँथे। अहिले यो सिलसिला निकै कम छ।
अहिले त डाक्टर सामाजिक मिडियाको लतलाई कुनै रोग मान्दैनन्। तर नेथन जस्ता कयौं डाक्टर छन्, जो यसलाई दिमागी रोग मानेर उपचार गर्छन्।
नेथन भन्छन् कि फेसबुक, ट्विटर र ह्वाट्सएपले हाम्रो दिमागी स्थिरतामा ठूलो खलल पैदा गर्छ। यसको उपचार सजिलो छैन। नेथन भन्छन् कि रक्सीको लत छुटाउन सजिलो छ। ड्रग्सको लत छुटाउन पनि गाह्रो छैन जति सामाजिक सञ्जालको एडिक्शन छुटाउन गाह्रो छ।
नेथक एक घण्टाको १५० डलर अर्थात करिब १५ हजार रुपैयाँ बराबर फिस लिन्छन्। अनि बिरामी उनीसंग ६ महिनासम्म उपचार गराउँछन्, तब मात्र सामाजिक सञ्जालको लत छुटाउन सक्छन्।।
रोचक कुरा त यो छ कि सधै अनलाइन रहनेको लत छुटाउन कयौंले अनलाइन सुविधा पनि सुरु गरेका छन्।
न्यूर्योकमा एक कम्पनी टकस्पेसले आफ्नो नेटवर्कबाट करिब एक हजार थेरापिस्ट जोडेको छ। यी थेरापिस्ट सामाजिक सञ्जालको लत छुटाउन मानिसहरुलाई अनलाइनबाट मद्धत गर्छन्। उनीहरले सञ्जालन गर्ने कोर्स १२ हप्ताको हुन्छ।
यो कम्पनी टेक्स्ट म्याजेसबाट मानिसहरुको मद्दत तर्छ। यसको लागि १३८ डलर प्रतिमहिना फिस असुल्छन्। अनलाइन एक्सपर्टसंग कुराकानी गर्न कम्पनी करिब ४०० डलर शुल्क लिन्छ। जो सामाजिक सञ्जालको बिरामी छ, उ आफ्नो स्मार्टफोनको मद्धतले आफ्नो उपचार गर्न सक्छ।
फोनमा नै उनीहरुलाई फोन कम प्रयोग गर्ने तरिका बताइन्छ।
कयौ यस्ता कम्पनी छन् जो मानिसहरुलाई डिजिटल जिन्दगी र वास्तविक जिन्दगीमा तालमेल गर्न सिकाउँछन्। जर्मनीमा यस्तै एक कम्पनी छ अफटाइम। यो आफ्नो ग्राहकलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न मद्धत गर्छ। यसले डिटक्स वर्कशप पनि आयोजना गर्छ।
अर्थात सामाजिक मिडियाको लतको छुटाउने कुनै नयाँ उपाय छैन। तपाई आफैले यो लतमा नियन्त्रण गर्नपर्छ। स्मार्टफोनबाट दुरी बढाउनु पर्छ। लत बढी गम्भीर भएमा एक्पर्टको मद्धत जरुरी हुन्छ।
रोग गम्भीर हुनुअगाव नै सामाजिक सञ्जालमा कसरी नियन्त्रितरुपमा सक्रिय रहने नियम बनाउन सकिन्छ। तब सायद यो रोग त्यति गम्भीर हुन पाउँदैन, जसरी यो मडारिरहेको छ।
बिहानै त्रिशूली नदीमा ट्रक खस्दा दुई ज्यान गयो, एक घाइते
भरतपुर । चितवनमा ट्रक दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । आज बिहान ५ः४५ बजे मुग्लिनबाट काठमाडौँ जाँदै…
संघीय सरकारले बखेडा झिक्दा प्रदेशमा औद्योगिक वातावरण बनेन : मुख्यमन्त्री राउत
वीरगञ्ज । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले प्रदेशमा औद्योगिक वातावरण निर्माणको लागि अप्ठ्यारो पारेको आरोप लगाएका छन् ।
तेह्र करोडको नक्कली सामान खरिद काण्डले सेनामा हंगामा, ठेकेदारले यसरी फसाए !
काठमाडौं । नेपाली सेनाको सम्भार रथी विभागको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका…
३१ करोड भ्रष्टाचार आरोप लागेका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गरी सुखी र समृद्ध नेपाल निर्माणलाई आफ्नो मूल एजेन्डा बनाएको…
चुरेमा विप्लव माओवादीको एके–४७ र मेसिनगन चलाउने तालिम फेला पर्यो
सिराहा । नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सिराहा र सप्तरीका विभिन्न ठाउँमा सैन्य संरचना बनाएर गतिविधी बढाएको तथ्य…
निजामती ऐन अन्तिम चरणमा, आज मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुँदै
काठमाडौं । कर्मचारीमा सर्वाधिक चासोको विषय बनिरहेको संघीय निजामती सेवा ऐन सम्भवतः आज मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने भएको छ ।